Iwe unogona kushandisa Apple Watch nefoni yako yeIndaneti here?
Unogona here kutarisa yako Apple Watch nefoni yako yeHouse? Ndiri kureva, smartwatch i smartwatch ... kurudyi?
The Apple Watch ndechimwe chezvinyorwa zvakanakisisa zvemashamba pamusika. Zvinogona kunge zvakadaro ari zvakanakisisa. Neimwe yezvisarudzo zvisarudzo zvevashandisi veIndonesia, vanhu vangazotanga kushamisika kana Apple Watch ndiyo nzira yekuenda nayo, asi izvozvo zvingashanda here?
Nhepfenyuro yeApple Watch 3 ine standalone LTE - ikozvino Ndinokwanisa here kuishandisa nefoni yangu yeIndaneti?
Mhinduro yacho ichiri kwete. Iwe haugone kuishandisa ne yako Android foni, asi unogona kuishandisa sechishongedzo. Iwe hauchakwanise kushandisa chero cheanodaidza maficha, uye hauzokwanise kushandisa chero eiyo LTE mashandiro, nekuti iyo yekumisikidza uye pairing maitiro inofanirwa kuitika ne iPhone. Saka kana iwe wakanyatsoiswa paApple Watch, kunyangwe iwe uri mushandisi weApple, saka enda neyekare, inodhura modhi.
Iwe hautore SIM kadhi kadiki kuisa muApple Watch; yatovakwa mukati mechip, uye kana iwe ukazvibatanidza ne iPhone, iyo iyo SIM SIM ruzivo inonyatsoteedzerwa kuki yeApple Watch's chip. Saka kana iwe uchizozvibatanidza neiyo shamwari ye iPhone, iwe unenge uri kuwana mafoni avo.
Unogona Apple Tarisa pair ne Android?
Kwete. Hazviiti. Apple Watch inotenderera pane zvinyorwa uye ruzivo pamusoro pe iPhone uye nekubatanidza kushanda, zvose zvinopera zvinofanira kuitwa neApple. Apple yakavhara zvakawanda zvehuwandu hwakagoverwa pakati pe iPhone neApple Watch, saka inoguma kuva zhinji kupfuura kungova nyore paBluetooth pairing.
Android smartwatches vane hukama hwakafanana kune mafoni eApple munzira iyo vatauri veBluetooth vane hukama neese mafoni (asi, hongu, hazvisi kuti rudimentary), nepo Apple Watch ne iPhone zvine ukama hwakaoma.
Ndeapi maApple mushandisi smartwatch sarudzo?
Izvo zvese zvinoenderana nezvauri kutsvaga. Kana iwe uchingotsvaga wekusimbisa muviri tracker uye chimwe chinhu chinokuzivisa iwe nezvemagwaro uye mafoni, ipapo ungangoda kufunga nezve Fitbit. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakasimba chinokutendera kuti upindure kumaemail uye zvinyorwa, pamwe zvinosanganisira Google Mubatsiri, uye nezvimwe, ipapo iwe uchazoda Android Wear or Samsung smartwatch.
Ko Apple Inotarisa inogara ichishanda ne Android?
Pakava nezvakawanda kufungidzira uye kudzokorora, uye ichokwadi, kana Apple ichida kuenderana nekuwedzera kukurumbira kweApple, zvinogona kungoita kubatana ikoko. Zvichida hazviite, kupihwa iyo yese Apple chengetedzo chinhu, asi zvingave zvine hungwaru zveApple, nekuti zvingangobira vazhinji vashandisi kure nemakwikwi seLG uye Samsung.
Iwe uri muIndaneti unoshuva ruzivo rwe smartwatch seHotosOS kana kuti iwe uri Apple User anoshuva foni yeIndaneti yaiva kune imwe mugumo wekubatana ikoko? Bvisa pane zvataurwa pasi apa.
Yashandurwa September 2017: Inoshandiswa kutarisana neApple Watch Series 3 nekubatana kwayo kweLTE.